China Spinning mesh firita BOPP firita yeBOPP% vinyl firimu process mutsetse Kugadzira uye Fekitori | Hanke
Kutenderera mesh firita BOPP firita yeBOPP% vinyl firimu maitiro mutsara
Kubudirira kwekuchenesa mwero
Ngura yakanaka, kupisa uye kumanikidza kuramba
Hupenyu hurefu hwekushanda
Spinning mesh firita inozivikanwawo seBOPP firita / extruder mafirita, yaisanganisira kutenderera firita, kurongedza kurongedza uye mhete, inoshandiswa kune BOPP yekugadzira mutsara.Hanke inogona kupa iyo yese firita masisitimu eBOPP yekugadzira.
Kugadzirwa kwepurasitiki kunoda hunyanzvi hwehunyanzvi pakati pevagadziri uye vanopa zvigadzirwa. Hanke anokwanisa kusanganisa yakakosha polymer filtration yekugadzira zvido nemazano matsva uye matsva ekugadzirisa mafirita ekugadzirisa.Tinogona kupa seti dzekutenderera mafirita kuti akubatsire iwe kuburitsa yakanaka polymer uye kudzikisa yako yekugadzira mutengo.
Kutenderera firita chinhu
Iyi firita ndeye cylindrical firita yakashongedzwa nezvikumbiro kuti uvandudze firita rate.it inogadzirwa yekuwana yakarukwa waya mesh iyo inowanzo shandiswa panopinda mvura uye inosiya midziyo kana chinhu. iyo tambo mesh firita chinhu chinobvisa zvakajairika chete iwo akakura maarticles ehutachiona kubva kune inoyerera.
Tichagadzirisa mafirita zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi muhukuru hwakasiyana kubva pahukuru hwakaenzana kusvika kune yakasarudzika saizi.
Filtration zvazvingava: 1-200micron
Dhayamita: 14-180mm, Kureba: 35-1500mm
Kutenderera / extruder firita pack
Kubatanidza mafirita akawanda ane akasiyana mesh saizi nemupendero / rim, isu tinopa mafirita anoratidza simba rakakwira uye kugona kwepamusoro.
Isu tinemhando dzakasiyana dzemuchina dzinofa kusanganisira firita ine denderedzwa chimiro pamwe nemuchina unofira muchimiro chemhete uye mhando yerudzi rwekutsikirira inofa.
Sefa pack pack
Iyo firita mapakeji anowanzo kuve akagadzirwa akanaka mesh yekusefa uye akashata mesh kutsigira.
Zvimiro yeSpin Pack Zvidzitiro:
1.Round Yakaumbwa Packs: Dhayamita 25 kusvika 600 mm (kana seyakagadzirwa)
2.Toroidal Yakaumbwa: Inner dhayamita 18 mm kusvika 250mm
Rokunze dhayamita 50mm kusvika 350mm
3.Rectangular Yakaumbwa: upamhi 30mm kusvika 100mm, kureba 60mm kusvika 400mm (kana seyakagadzirwa)
4.Slitting Bhandi: hushoma hupamhi 30mm
5.Cylinder Yakaumbwa: dhayamita yemukati kubva 8mm kusvika 600mm
6.Square Yakaumbwa, Oval Yakaumbwa, imwe mhando firita
Mashoko Stainless simbi, yakaderera kabhoni simbi, mhangura, alloy, nezvimwewo
Filter chiyero 1-200micron
Rim / pamupendero SS ,, Al, mhangura kana isina kumucheto, ine gap kana kwete
Kubatanidza Nzvimbo yakasungwa kana ine rim
Sefa midhiya Rakarukwa waya pajira riya kana sintered pajira riya
Mhete idzi dzinogara dzakagadzirwa nealuminium kana simbi isina chinhu
inoshandiswa zvakanyanya mupurasitiki maindasitiri ePP, PS, PVC, PET uye Chemical Fibers etc.
Pashure: Sintered firita element kenduru firita yakanyanya kushanda
Zvadaro: Isimbi isina waya waya mesh yakarukwa micro waya pajira rekusefa
Kutenderera Filter Chinhu
Kutenderera Filter Mapakeji
Kutenderera Mesh Sefa
Kutenderera Wire Mesh
Chakaita zvokugadzirwa Fiber Spinning Filter
Filter pajira riya rongedza extruder pajira riya disc pamwe zvakasiyana ...